I-Youtube to MP3 Converter (2020) - Windows, Android & Mac - Ezokuzijabulisa
I-Youtube ingelinye lamapulatifomu amakhulu ku-intanethi, lapho ungathola khona umculo. Kunamathani abaculi abasebenzisa le nsizakalo. Kuyinto enkulu kunazo zonke yokufinyelela ipulatifomu yevidiyo.
Amavidiyo omculo abe yisidingo sansuku zonke kulezi zinsuku kubaculi abaphumelelayo. Abantu balindele ukubona okuqukethwe ku-inthanethi ukuzijabulisa kwabo. Abaculi abaningi abadumile basebenzisa lokhu njengendlela yokuphromotha mahhala. Lo mhlahlandlela uzobheka ukuthi ungayiguqula kanjani noma iyiphi ividiyo ye-youtube ibe yifomethi ye-mp3. Kunezindlela eziningi ezitholakalayo ongazisebenzisa. Konke lokhu kuzosebenza ngo-100% kuwo wonke amadivayisi akho.
Ungaguquguqula kanjani i-Youtube ibe yi-Mp3?
Kunamawebhusayithi amaningi aku-inthanethi nezinhlelo zokusebenza ezinikezela ngale nsizakalo. Kulesi siqondisi, sizozama ukumboza konke kubafundi bethu. Izinyathelo ezidingekayo ziyefana kuwo wonke amawebhusayithi nakuhlelo lokusebenza. Nakhu ukuthi ungaqala kanjani ukulanda okuqukethwe kwe-youtube njengomsindo kunoma iyiphi idivayisi.
Ngale ndlela, sibheka amawebhusayithi asenza sikwazi ukuqala ukuguqulwa. Ngalesi sifundo, sisebenzisa iwebhusayithi ye-YTMP3. Idume kakhulu futhi isebenza kahle ngayo yonke ividiyo. Nazi izinyathelo ongazilandela ukuze zisetshenziswe kalula.
Isinyathelo esilandelayo ukuya ku-youtube bese uthola ividiyo ofuna ukuyiguqula ibe umsindo. Ungakopisha unamathisele isixhumanisi esivela kuwebhusayithi.
Ungaqala ngokuvakashela iwebhusayithi kusiphequluli sakho. Abasebenzisi bangachofoza kulesi sixhumanisi (https://ytmp3.cc/). Iwebhusayithi elula engenazinkinga ezingadingekile. Kopisha bese unamathisela isixhumanisi esivela kuwebhusayithi ye-youtube lapha. Chofoza inkinobho yokuguqula, bese ulungele ukuhamba.
Lapho inqubo yokuguqula yenzeka, ungalanda umphumela. Iphelele kubasebenzisi abafuna ukuqala ukonga umculo wabo. Ifayela lizoqala ukulanda ngokuzenzakalela.
Voila! Ungasebenzisa le ndlela ukulanda izingoma zakho ngokushesha okukhulu. Sincoma indlela yewebhusayithi kubasebenzisi kuma-desktops nakuma-laptops abo. Isebenza kahle kakhulu futhi ithatha isikhathi esincane kakhulu.
Ngale ndlela, sibheka uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ulande amavidiyo we-youtube njengamafayela we-mp3. Le ndlela isebenza kuwo wonke amadivayisi we-Android. Kulula ukulandela insizakalo yabafundi bethu. Kulesi sigaba, sizosebenzisa i-tubemate ukuthola kwakho kalula.
Abasebenzisi kufanele baqale ngokulanda insiza yeTubemate kumadivayisi wabo we-smartphone. Ayitholakali esitolo esisemthethweni se-google play. Noma ngubani angayijabulela insizakalo ngaphandle kwezinkinga nhlobo. Kufanele uvakashele isixhumanisi esilandelayo - https://tubemate.en.uptodown.com/android . Faka ifayili le-APK ngokunika amandla ukufakwa kusuka kwimithombo engaziwa.
Lapho ukulanda nokufaka sekuqedile, abasebenzisi bangaqala ngokuvakashela uhlelo lokusebenza. Isekela ukulanda kuzo zonke izingxenyekazi ezinkulu ze-intanethi. Abasebenzisi kufanele bakhethe ipulatifomu ye-youtube futhi bafune ividiyo yabo. I-Tubemate isebenzisa iwebhusayithi ye-youtube ephathekayo ngaphakathi kohlelo lwayo.
Abasebenzisi bangaqala ngokuvakashela noma iyiphi ividiyo kuhlelo lokusebenza. Ilungele abasebenzisi abajabulela ukubuka nokulalela okuqukethwe. Lapho uqala ukubuka amavidiyo omculo kuwebhusayithi, kungaba lula ukulanda. Inkinobho yokulanda ebomvu izovela kuvidiyo. Ungachofoza kuyo ukuze ubone izinketho.
I-Tubemate inika amandla abasebenzisi ukulanda okuqukethwe ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ungakhetha ifomethi ye-Mp3 ngokuya ngokulula kwakho.
Sithemba ukuthi le ndlela isebenza ngokungenaphutha kuzidingo zakho zomsindo. Zama lokhu namuhla. Sazise ukuthi imiphumela ibukeka kanjani ngokulanda kwakho.
Ukukhetha kwethu Okuphezulu:
Manje, uyazi ukuthi ungaguqula kanjani i-youtube ibe yi-mp3. Isikhathi sokuhlola izinketho zethu futhi sihlukanise. Lokhu kuzokusiza ukuthi ube nezinketho zokulondoloza ngaphandle kwalezo esesishilo kakade. Amathani amawebhusayithi ahlinzeka ngalesixazululo. Sithemba ukumboza iningi labo ukuze kube lula ukufinyelela kwakho. Ake sibheke ukuthi yini etholakalayo kithi sonke.
Kuyisiteji esiku-inthanethi esisizayo kuzidingo zakho zokuguqulwa. Iyafana newebhusayithi ye-YTMP3. Abasebenzisi bangaqala ngokushesha ukulanda okuqukethwe abakuthandayo endaweni yesikhulumi kalula. Izinyathelo zihlala zifana nokunikezwe ngenhla. Kopisha-namathisela isixhumanisi bese uchofoza ukuguqula.
I-interface yomsebenzisi ilula kakhulu ukuthi wonke umuntu ayisebenzise. Sincoma ukuthi uzame namuhla futhi uthole imiphumela emihle kakhulu. Ungaba nomculo wakho owuthandayo nemibukiso kule nkundla. Kuyindlela elula nokho esebenzayo edinga ukuthi ulandele imihlahlandlela engenhla.
I-Ontiva yiwebhusayithi ewusizo esiza abasebenzisi ngazo zonke izixazululo ze-youtube. Abasebenzisi bangaqala ukuguqula amavidiyo ngokuchofoza okulula. Sijabulela kakhulu isikhombimsebenzisi esibonakalayo esimnandi esitholakala kuwebhusayithi. I-sleek futhi ihlukile. Ipulatifomu isebenza kahle kakhulu futhi ayidingi mzamo omningi.
Ipulatifomu futhi inika amandla abasebenzisi ukulanda kuzimpawu eziningi ezahlukahlukene. Abasebenzisi bangakhetha izimfanelo zeminithi njengama-bitrate neminye imininingwane emincane.Ipulatifomu ikusiza nokuthi usebenzise inketho yokulanda ividiyo. Isebenza kahle kuwo wonke umuntu. Uhlu lwezici nalo luyamangaza esithangamini.
3. Isiguquli se-EasyMP3
Iwebhusayithi ye-EasyMP3Converter isebenza kahle kakhulu uma kukhulunywa ngokuqukethwe. Iwebhusayithi iyiqiniso egameni layo. Abasebenzisi bangasebenzisa le nkundla ukuthola imiphumela emihle. Sincoma bonke abafundi bethu ukuthi badlule kule nkundla. Ungajabulela ukulandwa kwekhwalithi ephezulu ngejubane elisheshayo elisheshayo.
Izikhathi zokuguqulwa ziphansi kakhulu kuwo wonke umuntu. Abasebenzisi bangakhetha futhi i-bitrate nekhwalithi ngale webhusayithi.Ikunikeza inkululeko ethile yokwenza ngokwezifiso ukuze uyisebenzise esikhathini esizayo. Ukulanda kuqala ngokushesha ngaphandle kwezinkinga.
4. Gcina kusuka
ISavefrom yiwebhusayithi yokuya kuzo zonke izidingo zokulanda ze-youtube. Kuyaziwa ngezici zokulanda ividiyo ezitholakalayo zabasebenzisi. Sincoma ukuthi ulandele lo mhlahlandlela ukuze usebenzise kalula.
Noma ngubani angavakashela iwebhusayithi futhi alande amavidiyo akhe awathandayo ngefomethi yomsindo. Ilungele kakhulu ukulandwa kwevidiyo kepha futhi ingasebenzela okuqukethwe komsindo.
Ukuguqula amavidiyo we-youtube abe ngamafayela we-mp3 kulula. Siyethemba umqondisi wethu ukwazile ukusikhanyisela ngezinyathelo okumele sizilandele. Singeze nezinye zezinto esizikhethile phezulu. Lokhu kuzokusiza ukuguqula noma yikuphi okuqukethwe endaweni yesikhulumi kalula.
vala imodi ephephile ngaphandle kwe-akhawunti
amawebhusayithi lapho unesithukuthezi
ukusakaza ama-movie mahhala akukho ukubhalisa
cisha imodi ephephile ye-tumblr
ungayisetha kanjani i-chromecast entsha
ama-movie amasha asakazwa mahhala
ungayijoyina kanjani i-amazon prime student